Posted by eKabita | 9:31 AM | कथा |0comments »
पति, पत्नी र फलानो
Posted by eKabita | 4:51 AM | कथा |0comments »
‘तपाईं आफ्नी स्वास्नी तह लगाएर राख्न सक्नुहुन्न? ऊ जहिल्यै मेरो बुढोलाई आपत्तिजनक एसएमएस पठाउँछे, आइ लभ यु, डार्लिङ, मिस यु, केके लेख्छे। तपाईंकी स्वास्नीले गर्दा मेरो त घरै बिग्रिने भयो, ऊ पहिल्यैदेखि मेरो बुढोको गर्लफ्रेन्ड रहिछ, यस्तो थाहा पाएकी भए म बिहे नै गर्ने थिइनँ।'
केही महिनापछि पत्नीले भनी, ‘बिहेभन्दा अघि मेरो फलानोसँग सम्बन्ध थियो। हाम्रो सम्बन्ध त साधारण हो तर मान्छेहरूले धेरै कुरा काटे।' वाइकेलाई त्यसबेला आफ्नी पत्नी विचरीजस्तो लागेको थियो। उसले मन फराक पारेको थियो- उमेर पुगेका, बिहे नभएका केटाकेटीबीच सम्बन्ध हुनु कुन नौलो कुरा भयो र!
वाइकेलाई भने बिहेअघि पनि केटीहरूसँग लाज लाग्थ्यो। उसले जीवनमै सिधा आँखाले हेरेको पहिलो महिला उसकी पत्नी नै थिई। लभसभको चक्करमा ऊ कहिल्यै परेन । तैपनि छाती ठूलो पारेर उसले पत्नीलाई भन्यो, ‘पुराना कुरा बिर्सिदेऊ, अब हामीले एउटा बेग्लै संसार बसाउनुपर्छ, वास्तविकता यही हो।' भन्न त भन्यो तर त्यही दिनदेखि उसलाई पत्नीले लुकीलुकी कतै फोन/एसएमएस गरेको आभास हुन थाल्यो। उसले पत्नीका गतिविधिमा अलि ध्यान पनि दिन थालेको थियो।
वाइकेले धेरैचोटि पत्नीलाई सम्झायो, ‘तिमी अब फलानोलाई फोन नगर, एसएमएस नपठाऊ, ऊबाट टाढै बस।' पत्नी पनि मुखेन्जी त हुन्छ भन्थी। फलानोको एसएमएस पाएपछि भने उसको मन पनि चुमचुम गरिहाल्दो रैछ। एसएमएस शृंखला जारी रह्यो ।
उसलाई भित्रभित्रै आफूचाहिँ बाहिरी मान्छे, आफ्नी पत्नी र फलानोचाहिँ लोग्नेस्वास्नीजस्तो लाग्न थाल्यो। टाउको बेस्कन दुख्न थाल्यो । मनमा हुन्डरी चलेको थियो। सुनाउने मान्छे कोही थिएन । एक दिन पत्नीलाई भन्यो, ‘एसएमएस पठाऊ, मेरो कुनै आपत्ति छैन, तर त्यहाँ प्रयोग हुने शब्दहरूसँग मलाई आपत्ति छ।' उसले त्यो दिन पत्नीलाई धेरै बेरसम्म खेरिरह्यो, ‘फलानोसँग दाजुको सम्बन्ध हो भन्छौ तिमी, एसएमएसै पिच्छे आइ लभ यु, डार्लिङ, किस यु, मिस यु लेख्ने कस्तो दाजुबहिनीको सम्बन्ध हो?'
पत्नीले केही होइन भनिरही। भन्थी, 'कस्तो शंकालु मान्छे, दाजुबहिनीको सम्बन्धमा पनि विश्वास नगर्ने!' फलानोसँग वाइकेकी पत्नीको सम्बन्ध भने बिस्तारै झ्यागिँदै गयो । ऊ कार्यालय गएको बेलामात्र होइन, घरमै बसेका बेला पनि उसकी पत्नी फलानोसँग फोनमा लामोलामो कुरा गर्न थाली । वाइकेले घरमा फोन जोडेको थियो। त्यसको बिल जहिल्यै बढीबढी आउन थाल्यो। डिटेल्सबाट थाहा पायो, उसकी पत्नी फलानोलाई लामोलामो एसटिडी कल गर्दिरैछे। रातबिरात, जुनसुकै बेला। उनीहरू घन्टौं फोनमा बिताउँथे ।
यसैबीच फलानो एसटिडीबाट लोकल नम्बरमै आइपुग्यो, सरुवा भएर। त्यसपछि वाइकेको ल्यान्डलाइन बिल अचानक ओर्लियो। फलानोसँग उसकी पत्नीको सम्बन्ध भने फोन/एसएमएसबाट एक कदम अगाडि बढ्यो। उनीहरूबीच नियमित भेटघाटै हुन थाल्यो । वाइकेलाई छिमेकीले भन्न थाले, ‘तिम्रो घरमा त दिउँसोदिउँसो एउटा केटा बाइक लिएर आउँछ र दिनभरि बसेर जान्छ।''हामी उनीहरूलाई दिनभरि छतमा जिस्किएको देख्छौं।' बैंकमा काम गर्ने फलानो मार्केटिङको बहानामा वाइकेको घर आउँदोरहेछ र दिनभरि बसेर जाँदो रहेछ । उसको टाउको झनै रनन्न हुन थाल्यो। लामो समयदेखि शंका गर्दै आएको फलानोको पत्नीसँग नियमित उठबस नै हुन थालेको थाहा पाएपछि वाइकेको निद्रा हरायो । यसैबीच फलानोको बिहे भयो ।
वाइकेलाई लाग्यो, अब त मेरो घर सुध्रेला। 'बिहे भइसकेपछि त फलानोले मेरी श्रीमतीलाई आइ लभ यु डार्लिङ, मिस यु भनेर एसएमएस पठाउँदैन कि!'नभन्दै एकदुई महिना एसएमएसको भोल्युम निकै पातलो भयो । वाइकेको आशा लामो टिक्न भने सकेन। फेरि एसएमएस दोहोरी सुरु भइहाल्यो, पुरानै गतिमा ।
वाइके र पत्नीको सम्बन्ध भने कसरी चर्किसकेको थियो भने उनीहरू एउटै घरमा पनि बेग्लै कोठामा बस्न थालेका थिए। औपचारिकता बाहेक अरू बोलचाल हुन्थेन। भेट हुँदा आँखा तरेर हेर्थे। सम्बन्धको सबै रस निखि्रसकेको थियो । यहीबीच २०६८ असार १५ आयो जुन दिन फलानोकी पत्नीले वाइकेलाई फोन गरी र ‘आफ्नी पत्नी सम्हालेर राख्न' सम्झाई।
पत्नी र फलानोको सम्बन्धले आजित भइसकेको वाइकेले यो दिन पशुपति मन्दिरमा फलानोलाई भेट्यो र भन्यो, ‘तपाईं र मेरी श्रीमतीको एसएमएस दोहोरीले म वाक्कै भइसकेँ। तपाईंहरू दुईजना आइ लभ यु र डार्लिङको सम्बन्धबाट धेरै अगाडि जानुभएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन, स्विकार्नुस् मेरी श्रीमती। मलाईचाहिँ छुट्कारा चाहियो। दुइटी श्रीमती अरूका पनि हुन्छन्, लानुस्। लगेर सँगै राख्नुस्।'
फलानोले उल्टै वाइकेलाई सम्झायो। भन्यो, ‘लौ, के कुरा गर्नुभएको, वाइकेजी? तपाईंकी श्रीमती त मेरी छिमेकी बहिनी हुन्, के अरूको लहैलहैमा लाग्नुभएको?' विचरा वाइकेले कसरी पो विश्वास गरोस्! उसले झन्डै नौ वर्षदेखि पत्नीको व्यवहार झेल्दै आएको थियो। फलानो र आफ्नी पत्नीको फोन/एसएमएस दोहोरीले ऊ अब पागलै हुनमात्र बाँकी थियो।
वाइकेले फलानोलाई भन्यो, ‘तपाईंहरू दुईलाई बिहेअघिदेखि नै सबैले शंका गरिआएका रहेछन्, अहिले आएर मैलेमात्र कसरी पत्याउने? ठिक छ, तपाईंहरू दाजुबहिनी नै हो भने हाम्रो घरमा आउनुस् र मेरी श्रीमतीको टाउकोमा हात राखेर 'तिमी मेरी बहिनी हौ' भनिदिनुस् न त!'
फलानोले भन्यो, ‘हुन्छ, यत्ति गर्न मलाई कुनै आपत्ति छैन।' घर सप्रेला कि भन्ने झिनो आशा वाइकेको मनमा पलायो । तर, त्यसपछि फलानो कहिल्यै देखिएन । फोन/एसएमएस दोहोरी भने चलिरह्यो।
यो दिन वाइकेकी पत्नीको जन्मदिन परेको थियो। पत्नीसँग नबोलेको महिनौं भइसके पनि उसलाई लाग्यो- आजकै शुभदिनले हाम्रो जीवनको तिक्तता मेटिहाल्छ कि! उसले अझै एकबाजी प्रयास गर्ने विचार गर्यो । त्यही आशामा उसले पत्नीलाई भन्यो, ‘ह्यापी बर्थडे टु यु।'
एउटै घरमा सँगै बस्ने पत्नीलाई एसएमएस पनि पठायो, ‘तिमीलाई जन्मदिनको धेरैधेरै शुभकामना। जे हुनु भइसक्यो, आजको दिनले हामी दुवैलाई सँगै मिलेर बस्न प्रेरणा देओस् भन्ने प्रार्थना गर्न चाहन्छु।' पत्नीको जन्मदिनको तीन दिनअघि वाइकेलाई लागेको थियो, अब पत्नीसँग एउटै घरमा बस्न सकिँदैन। छुट्टिनुबाहेक विकल्प छैन। तैपनि उसले पत्नीसँग अन्तिम संवाद गरेको थियो, ‘अब जे गर्ने भए पनि निर्णय गरौं। कि छुट्टिऔं, कि मिलेर सँगै बसौं। म त भन्छु- हुने हुनामी भइसक्यो, पुराना कुरा सबै बिर्सिदिऊँ, यी दुईजना लालाबालाकै लागि भए पनि साझा समझदारीमा सँगै बसौं।' पत्नी केही बोलिन। उसले बोलुन्जेल चुप लागेरै सुनिरही।
वाइकेले भन्यो, ‘सँगै बस्न तिमी मान्दिनौं भने भदौ १७ गते म घर छाड्छु।' उसले पत्नीलाई दुई साताको म्याद दिएको थियो । पत्नीले यत्तिचाहिँ भनी, ‘तपाईंको घर हो, किन छाड्नुहुन्छ? मै छाड्दिउँला नि!' सँगै मिलेर बस्न सकिने/नसकिनेबारे पत्नीले एकै शब्द नओकलेपछि वाइके झनै दिग्दार भएको थियो। तैपनि उसले जन्मदिनमा पत्नीलाई फकाउने अन्तिम प्रयास गर्यो ।
यो दिन वाइके कार्यालय गएको मौकामा पत्नीले घर छाडेकी थिई । बेलुका ऊ घर आउँदा पत्नी थिइन। कहिलेकाहीँ राति ढिला घर आउँथी। कम्प्युटर सिक्दैछु भन्थी। त्यो दिन भने ऊ अबेरसम्म पनि आइन । वाइके झनै रन्थनियो। पत्नी खोज्न पुलिस गुहार्यो। सासुससुरालाई फोन गर्यो। सासुससुराले उल्टै हप्काए, ‘हामीले तिमीलाई छोरी दिएका हौं, तिमीले नै खोज्नुपर्छ।'पछि थाहा पायो, सासुससुरा भने छोरीसँग निरन्तर सम्पर्कमै रहेछन्।
अलि दिनपछि पत्नीले वाइकेलाई एसएमएस गरी, ‘मेरा दुई छोराको बाउ तपाईं नै हो भन्ने प्रमाण के छ?' ऊ अब फलानोसँग आफ्नो सम्बन्धबारे खुल्न थालेकी थिई। वाइकेलाई हेप्न थालेकी थिई ।
धन्य! उसकी पत्नीले पनि डिभोर्स नै चाहेकी थिई । एक दिन वाइके र उसकी पत्नी सिनामंगलको एउटा रेस्टुराँमा भेटे। पत्नीले भनी, 'म डिभोर्स दिउँला, कति पैसा दिनुहुन्छ?'वाइके पत्नीलाई डिभोर्सवापत साढे तीन लाख अंश दिन राजी भयो।
वाइकेले मलाई भन्यो, ‘बुझ्नुभयो, यी स्वास्नीमान्छेको केही भर हुँदैन रहेछ, थुइक्क!'म हाँसेमात्र ।
कपनको घर बेचेर सबै ऋण तिरिदिएछ। अहिले ऊ कहिले भाइ, कहिले दिदी र कहिले साथीहरूको कोठामा रात गुजार्दो रहेछ। मान्छे भने फ्रेस देखिन्थ्यो । मैले जिस्क्याएँ, ‘फेरि बिहे गर्ने होइन त?'जवाफमा वाइके मुस्कायो। अग्लो र पातलो ज्यानको ऊ मुस्काउँदा अझ ह्यान्डसम देखिएको थियो ।
नयाँ जमानाकी अनुपमा
Posted by eKabita | 3:09 AM | लघुकथा |0comments »
छोरी अनुपमाले सपनामा पनि सोचेकी थिइन, यस्तो होला भनेर। तर कहिलेकाहीँ सपनामा नसोचेको कुरा भइदिन्छ। बिहेको जग्गेमा बस्न मेहदीले हात सजाएर बसेकी छोरीको रहर र उत्सुकता एउटै घटनाले मारिदिएको थियो। 'जन्ती नआउने भयो,' छोरीले सुनी। उसका नौनाडी गले। चिटचिट पसिना आयो कन्चटमा। किन नआउने भयो जन्ती?
अनुपमाले बुझ्नै सकिन। पोहोर पनि यस्तै भएको थियो। बिहेको ठीक तीन दिनअघि केटाले उसँग बिहे गर्न इन्कार गर्दै भनेको थियो, 'ऊजस्तो खेलीखाई गरिसकेकी केटीसँग बिहे गरेर आफ्नो जिन्नगी बर्बाद गर्नुछैन। योसँग बिहे गर्नैपर्छ भने ठेरी बजारको घर दहेजमा पाउनुपर्छ।'
खेलीखाई त उसले गरेकी नै थिई। त्यसमा के नै ठूलो कुरो थियो र? कन्या कलेजमा पढे पनि अनुपमाका धेरै केटा साथी थिए। ती सबैसँग उसको भावनात्मक र शारीरिक कुनै न कुनै प्रकारको लसपस थियो। दुईचार जनासँगको सम्बन्ध चुमा-चाटीबाट अघि बढेको थिएन भने दुईचार जनासँगको सम्बन्ध-यात्रा सफारी जिपमा चढेर दुईचार सय किलोमिटर परसम्म हुइँकिइसकेको थियो। अनुपमाका आफ्नै नैनी चचाले बनाउन लागेका अबधी सिनेमाको हिरोइन बन्ने आशामा ऊ सिनेमाका डाइरेक्टरसँग लोकेसन टुरमा लखनउ र बरेली गएकी थिई। फर्केर आएपछि दुईचार साता एक्टिङको ट्रेनिङमा पनि अल्भि्कई। नैनी चचाले फिल्म बनाए पनि ऊ हिरोइन बन्न सकिन। हिरोइनकी साथीको सानो रोलमा नै सन्तुष्ट भई। उसको अतिशय खेलकुद देखेर चिन्तित भएका बाबाले बिहेको कुरा उठाएपछि पहिले त ऊ रिसाए जस्तो गरेकी थिई। पछि बिस्तारै भौजीको कानमा भनिदिएकी थिई, 'मलाई मन्जुर छ।'
त्यसपछि यो अबधी मूलको नेपाली केटो अवधेश फेला परेको थियो उसका लागि। अवधेशको चिनाटिप्पन लगन र राशि सबै जुरेका थिए अनुपमासँग। जुराउनेले भनेको थियो, 'यिनको कोखबाट छोराको लस्कर लाग्नेछन्। यिनी सधँै दूधले नुहाउनेछिन्।' जुराउनेको कुरा सुनेकी भौजीले ननद अनुपमालाई जस्ताको तस्तै सुनाइदिँदा मनमनै ऊ मख्ख परेकी थिई। अवधेशको अनुहार अलिकति घोडेपाराको भए पनि जिउ खाइलाग्दो थियो। छोरीका लागि उसका बाबाले दहेजको थुप्रो लगाइदिएका थिए। ज्वाइँसाहबका लागि मारुती अल्टो, छोरीका लागि प्लेजर स्कुटी, स्टेट बैंक अफ इन्डियामा छोरीज्वाइँका लागि २५ लाख भारुको एकमुष्ट शैक्षिक खर्च खाता, सम्धीका लागि मागअनुसारको बेग्लै सम्पत्ति, सम्धाइनका लागि तनिष्कको हिरा सेट- लल्लनजीले कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन्। गुनासोका लागि कसैलाई कुनै ठाउँ दिएका थिएनन्।
यति हुँदाहुँदै पनि जन्ती नआउने भएपछि अनुपमा थला परी। अब फेरि कोसँगको अफेयरको शिकार बन्यो मेरो बिहे? अनुपमालाई आफ्नो प्लेफुल जीवनको पछितो भयो। एक समय त ऊ गति छाडेरै प्रेममा लागेकी थिई। कुशीनगरको रतन अग्रवालले रतिरागात्मक भावनाको प्रचण्ड वेगमा उसलाई दिएको प्रेमोपहारको विसर्जन गर्न उसलाई निकै कठिन परेको थियो। तै भौजाइले उसलाई आफ्नी ममेरी बहनीको घर लगेर जोगाएकी थिइन्। बस्तीको एउटा डाक्टरले पाँच हजार रुपैयाँको तगडा फिस लिएर अनुपमाको पेटबाट तीन महिनाको गर्भ गिराइदिएको थियो।
यसपटकको घटना त्यस्तो थिएन। अनुपमाका हुनेवाला ससुरालाई नेपाल सरकारको पुलिसले रासन ठेक्का र व्यक्ति अपहरणको दोहोरो मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो। प्रस्तावित ससुरा त्यतिखेर आफ्ना पाहुना पासासँग अबधी भाषामा गुफ्तगु गर्दै थिए। देश-परदेशका मानिससँग चिनापर्ची गर्दा ससुरा आफूलाई कहलिएको राजनीतिज्ञ बताउँथे भने उनका निकट छिमेकीहरू उनलाई तस्करको दलाल र कहलिएको फटाहाका रूपमा चिन्थे। छरछिमेकीले जसरी चिने पनि उनकै घरमा लाग्थ्यो मानिसको ओइरो। कुरा २५ करोडबाट सुरु गर्थे। बार्गेनिङ चल्दै जाँदा २५ लाखमा मान्थे। केरादेखि कतारसम्मका व्यापारमा हात हालेका थिए। आफ्नो द्वारमा आश्रयका लागि आएका आशामुखीहरूलाई सुनाएर मोबाइलमा देशका मन्त्रीदेखि मन्त्रीका ढोकामा पालो बसेका सन्त्रीसम्म सबैलाई थर्काउँथे। दूरसञ्चारको नेटवर्कले उनको आवाज थर्काइएको व्यक्तिको कानमा कहिल्यै पर्न दिँदैनथ्यो। कति रमाइलो!
जन्ती नआउने दुःखद खबर सुनेपछि उता अनुपमाका बाबा लल्लन जग्गेमा डङ्ग्रङ्ङ पछारिए। यसरी पछारिएर उनले अलिकति आफ्नो अभिनय क्षमता देखाएका थिए भने अलिकति तोडै परेको थियो। प्रस्तावित सम्धीको बारेमा उनलाई धेरै कुरा थाहा थियो। त्यसैले उनी घबराएका थिएनन्। लल्लनजी एकैछिनमा जागा भए। त्यसपछि मोबाइल उचालेर प्रस्तावित सम्धीलाई आश्वासन दिए, 'बिलकुल नघबराउनुहोला। ममाथि एमएलएसँग कुरा गरेर ठ्याकठुक सबै कुरा मिलाइहाल्छु। अहिलेका लागि उतातिर तपार्इँ बिहे स्थगित गरिदिनोस्, यतातिर म स्थगित गरिदिन्छु। केटाले केटीलाई केटीले केटालाई मन मिलाएकै छन्...'
बाबाको आवाज कानमा परेपछि अनुपमाको मन चिसो भयो। उसले भौजीको कानमा बिस्तारै भनी, 'उनीसँग अहिलेदेखि बसेर पछि बिहे गरे पनि के हुन्छ र? बसेपछि त बिहे पक्कै हुन्छ नि!'
भौजीले अनुपमाको अनुहारमा हेरिन्। उनको घुम्टोबाहिर नयाँ जमानाको उज्यालो छरिएको थियो।
Posted by eKabita | 9:04 AM | चुटकिला |0comments »
एक युवतीले coin हालेर आफ्नो वजन तौलिन ५२ केजी
सेंडल खोलिन ५१ केजी
जेकेट खोलिन ५० केजी
फेरी ओढ्ने खोलिन ४९ केजी
तर coin सकियो ……
छेउमा माग्न बसेको भिखारीले भन्यो – “तिमी खोल्दै जाऊ ! coin म हाल्छु !”
श्रीमान काम बाट फर्किएर घरमा पुग्यो
श्रीमती : मैले आज नोकरनीलाई घरबाट निकाली दिए
श्रीमान : तर त्यो बिचरीलाई एक मौका त दिएको भए हुन्थियो
श्रीमती :उसलाई त जसले पनि मौका दिई हाल्छ तर म तिमीलाई फेरी मौका दिन चाहन्न
Posted by eKabita | 12:37 AM | कथा |0comments »
Posted by eKabita | 10:10 PM | कथा |0comments »
- खगेन्द्र पराजुली 'शून्य'
सूर्योदयको कलिलो सिन्दूरे किरणले पूर्वी क्षितिज रङ्गिएको थियो नवदुलहीको सिउँदोझैं। बसन्त ऋतुको नवागमनलाई नयाँ पालुवा, शीतल सर्सराहट र चराहरुको चिर्विराइले भव्य स्वागत गरिरहेका थिए। त्यो नयाँ विहानी नयाँ उमङ्ग बोकेर आएको थियो, साँच्ची प्रेममय थियो त्यो दिन। किरण देउरालीको फलैंचामा बसेर उही सिन्दूरे क्षितिजतिर एकोहोरो टोलाइरहेको थियो, मानौं ऊ कसैको आगमनको प्रतिक्षामा एकाविहानैदेखि चौतारोमा कुरिरहेको छ। ऊ अतीतको महासागरभित्र पौडन थाल्छ, जहाँ उसको जीवनका केही क्षणहरु अविस्मरणीय भएर गुज्रेका थिए। त्यो एकान्त, त्यो मनोरम प्राकृतिक बागमा ऊ घरिघरि गुन्गुनाउछ अन्तरह्दयको गीत, यसरी―
यस्तो पनि हुँदोरै'छ जिन्दगीमा कहिले कहिले, कसैलाई माया गर्नु एउटा भूल गरें मैंले.......
दिन उही हो, स्थान उही हो, आजभन्दा एक बर्षअघि, प्रेम दिवसको दिन रश्मीसगँ घण्टौं अङ्गालोमा बाधिएर जीवन र जगतलाई भूलेको क्षण अनि जिन्दगीमा कहिल्यै नछुटिने कसम खाएको क्षण अहिलेझैं लाग्छ उसलाई। उफ्...! कति पीरो अतीत अनि पीरो हुँदा–हुँदै पनि कति मीठो सम्झना! यो दुखाइ जीवनभर कहिल्यै गुमाउन चाहँदैन ऊ, दुखिरहनुपर्छ मुटुभित्र यो मीठो दुखाइ, पोलिरहनुपर्छ सम्झनाले त्यो कोमल मुटु उसको छातीभित्र। सम्झँदा मात्रै पनि रश्मीको यादले नयनपलक भिजेर आउँछन्, हल्का पवनको सर्सराहटले उनको लामो कपाल उसको गालाभरि सर्सराएको यादले अनायासै ऊ रित्तो गालामा हात पुर्‍याउँछ। समयले आज उसलाई एक्लो बनाएको छ रश्मीको अनुपस्थितिमा। पोहोर साल प्रेम दिवसको दिन उनले उपहारस्वरुप दिएको एउटा डायरी, त्यसमा टाँसिएको उनको हँसिलो प्रतिविम्ब अनि रातो गुलाफ, त्योभन्दा बढी मुटुभरि यादैयाद मात्र उसको साथमा छाडिदिएको छ समयले, तर खै रश्मी? रश्मीलाई समयले कहाँ पुर्‍यायो कहाँ! हत्केलाले भिजेका परेलीहरु पुछेर ऊ लेख्न थाल्छ त्यही डायरीका पानामा―
असीम–असीम सम्झना अनि ह्दयभरिको माया स्वीकार है जहाँ भए पनि, यो अभागीको। रश्मी, 'किरण र रश्मीलाई संसारको कुनै पनि शक्तिले अलग गर्न सक्दैन' भन्थ्यौ हैन तिमी? तर गुलाफझैं कोमल ह्दय कसरी पत्थरझैं कठोर भयो तिम्रो? हँ कसरी? हुन त मभन्दा सुन्दर, धनी अनि धरै माया गर्ने मान्छे पायौ होला सायद, त्यसैले त मलाई अनि ती निर्दोष अतितका पलहरुलाई चटक्क भूल्न सक्यौ। तर याद राख रश्मी मैंलेजति माया गर्ने र गरिरहने मान्छे विश्वमा तिमीले कहिं पाउन सक्दिनौ। हो, सम्पति पायौ होला, चिप्ले कारको सफर पायौ होला तर रश्मी, सम्पति त केवल यो झूठो संसारको भ्रम हो। तिम्रो जस्तो निर्दयी मुटुले यस्तो कुरा कसरी पो बुझ्न सकोस् र! जे होस्, तिमी जहाँसुकै रहे पनि खुशी रहू म त यही चाहन्छु। रश्मी, आज मलाई उही पुरानो दिनले चिमोटेको छ नमीठो गरी। आज 'प्रेम दिवस', यतिबेला तिमी कसैको अङ्गालोभित्र हराइरहेकी हौली, म रोइरहेको छु यहाँ एक्लै। झनो आशा मिलनको बोकी यो देउराली कुर्न छाडेकै छैन, मबाट भर्नुपर्ने तिम्रो स्वार्थको भाँडो भरिइसक्यो होला त्यसैले त मलाई सम्झने कोशिश गरिनौ। देउराली यही हो, जहाँ तिमीले मेरो छातीमा खाली सिउँदोसहितको टाउको अड्याएर धेरैबेर रोएको, युगौं नभूल्ने बाचा गरेको, खै सानु, किन यति चाँडै भूल्यौ ती दिनहरु! पोहोर साल यसै दिन हामी यही देउरालीको चौतारीको यही एकान्तमा घण्टौं अङ्गालोमा बाँधिएर चीरकालीन मिलनका कुराहरु गरेथ्यौं, तिमी मदेखि र म तिमीदेखि टाढा हुनुपर्‍यो भने कसरी सहने त्यो क्षण भन्ने कुराले नमीठो गरी पिरोल्थ्यो। तिमी रुन थाल्थ्यौ, म पनि कहाँ आँशु थाम्न सक्थें र! तिम्रो स्पर्श यो कपालभरि अझै अनुभव भइरहेछ। तिम्रा नौनीझैं नरम अधरहरु यी अभागी ओठहरुले खै कसरी भूल्न सक्लान् र! रश्मी, मलाई त मीठो लागेको थियो तिम्रो आगमन मेरो जीवनमा। तर...., तर तिमी त मायाको बगैंचामा फुलेका फूलहरुभित्र टम्म भरिएको गुलियो रस चाख्दै उड्ने भमरा रहिछौ। मभित्र रहेको मायाको घडा चूसेर तिमी खै कता गयौ कता, म यहाँ भ्रमरचुम्बनविहीन फूल बनी भमरा तिमीलाई अझै पर्खिरहेको छु मीठो चुम्बनको आशा बोकेर। मलाई त सधैं ढकमक्क फुलिरहन मन लाग्छ। तर तिमी..., तिमी त फक्रिएको फूल विस्वासघातको रापले ओइलाएको अनि सुकेर खङ्रङ्ङ्ग भएको हेर्न चाहँदिरहिछौ। आखिर के पायौ? हँ के? त्यही क्षणिक मोह? गुलियो रस चुसुञ्जेल चुम्यौ सुकोमल फूल अनि अघाएपछि चटक्कै विर्सेर गयौ, तिमी अघाएर गयौ, तर यो नसोच्नू कहिल्यै तिमीले मलाई नै रित्याएर गयौ। मसगँ तिमीले अहिले पाएको जस्तो हबेली र चिप्ले कार त छैनन्, जुन रित्तिन कतिबेर छैन, तर मसगँ कहिल्यै नरित्तिने मायाको महासागर छ। त्यसैले त मुटुमा विस्वासघातको भाला रोपी जाने तिमीलाई अझै पनि माया गरिरहेको छु अनि गरी नै रहनेछु मृत्युपर्यन्तसम्म पनि।
हरेक पूर्णिमा शीतल जून लिएर आउँथ्यो, हरेक विहानी मीठो धून लिएर आउँथ्यो तर आजभोलि पूर्णिमा रापिलो ताप लिएर आउँछ, विहानी विरह र आन्तरिक चित्कार लिएर आउँछ। खै रश्मी, कल्पना नै गर्न सक्तिन म समय यति निष्ठूरी हुन्छ भनेर, अँह सोच्नै सक्तिन म समयको धूलोले मप्रतिको तिम्रो मीठो मायालाई यति चाँडै छोपिदिन्छ भनेर। बरु ज्यान मार्ने सुनामी सहन्थें, तर आत्मा मार्ने यो पीरो वियोग सहन सक्तिन, भन सानु, अब के गरुँ म? हो, रुढिबादी समाजले टुसाउँदै गरेको मायाको कलिलो विरुवा निमिट्यान्न पार्न खोजेको पनि हुनसक्छ। तर फुच्चु, 'संसार बदल्न पहिले आफैं बदलिनु पर्छ' भन्ने महान् वाणी उत्कर्ष गर्ने तिम्रो कोमल तर विद्रोही मन किन उही कुण्ठित समाजको बन्धनभित्र जकडिन रमायो? आखिर किन? स्वीकार छ मलाई पनि तिम्रो स्वीकारोक्ति। तर रश्मी, विन्ति छ, मलाई जस्तै उसलाई पनि मूल्यहीन खोस्टा बनाएर रछ्यानमा नफाल्नू ल, तिमी त आस्तिक मान्छे, ठूलो पाप लाग्नेछ त्यसो गर्‍यौ भने फेरि। अरु त के भनूँ, उसले तिमीलाई चाहेजति माया दिन सकेन भने म त हरहमेशा सबैभन्दा बढी माया दिन्छु तिमीलाई। चाहन्छ्यौ भने जुनीभरिलाई स्वागत छ मेरो जीवनमा।
उही तिमीलाई जुनी–जुनीसम्म भूल्न नसक्ने अभागी किरण।
भावनामा बगिरहेको किरण झस्किन्छ, शून्यताको प्रतिक्षा उसको, आकाशसरी शून्य–शून्य छ। कसिलो गाँठो गलाभित्र बोकी आँशु पुछेर लामो सास फेर्छ अनि उभिएर पल्लो क्षितिज नियाल्छ केही बेर। हल्का हावाले वरपिपलका पातहरु फर्फराइरहेका थिए,सल्लाघारी विरहलाग्दो सुसेली गाइरहेको थियो
नयाँ रचनाहरु तपाईको ईमेल ईनबक्समै प्राप्त गर्नुहोस ।
चचिर्त पोस्टहरु !
जिन्दगी एक यात्रा हो कहाँबाट शुरु भइ कहाँ पुगेर अन्त हुन्छ कसैलाई थाहा हुन्न जति घुम्ति पार गर्यो उतिनै कठिनाई झेल्नुपर्छ, कति बेला कुन ठाउ...
त्यो रुपा (मनोवाद यौन कथा)
बिमल कुमार, यस्तै ३६,३७ बर्षको बिबाहित पुरुष हो, ऊ काठमाडौँको एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा जागिर खाईरहेको छ । उसको कम्पनीमा पनि ऊ निकै इमान्दार अ...
वेश्या- १ [कथा]
कथाकार, आत्मनिष्ठूर बन्दैछु म । म वेश्या हुँ, यसो भन्दा मलाई कुनै हिच्चकिचाहट हुँदैन । जब म एकान्तिक हुन्छु, तब विगतका अभिव्यञ्जनाहरुले मेर...
आफ्नो वजन एक युवतीले coin हालेर आफ्नो वजन तौलिन ५२ केजी सेंडल खोलिन ५१ केजी जेकेट खोलिन ५० केजी फेरी ओढ्ने खोलिन ४९ केजी तर coin स...
-चिना थापा सिन्धुली प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको प्यारो मेरो देश छन् धेरै संस्कृति र थरीथरीका भेष । प्रणभन्दा प्यारो छ यो देश नेपाल छन्...
मनोज दाहाल- कथामा चार पात्र छन्- वाइके, उसकी पत्नी, फलानो र उसकी पनि पत्नी। कथामा फलानोकी पत्नीको भूमिका गौण छ। मुख्य भूमिका वाइके, उसकी पत...
मिस कल रमनः -आफ्नो शिक्षिकसंग) मिस, के तपाईले मेरो मोबाइलमा फोन गर्नुभएको थियो ? शिशिकाः मैले १ छैन त, तर किन ? रमनः हिजो मैले मेरो मोबाइ...
रोमन वाट नेपाली मा टाइप गर्नुहोस ।